ကုန္သြယ္မႈဂီအတွက် - ရှေ့နေများအတွက်ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီ! အားလုံးရှေ့နေများကိုအွန်လိုင်း။
ရှာဖွေနေမည်သူမဆိုများအတွက် အမှန်တကယ်ပြည့်စုံအလုပ်ပြည်ပအတွေ့အကြုံလိုအပ်အထက်မကနောက်ထပ်ကြည့်ရှုခုႏွစ္ထုတ္၊မြန်မာ။ အတူယက်ကမ်းခြေ၊ရင္သပ္ရႈေချောက်၊၊ရဲတိုက်၊တစ်ဦးနိုင်ငံတကာတွင်ကွဲပြားသောလူဦးရေ၊ဒီဥရောပခရီးသည္၏အမြောက်အများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အခွင့်အလမ်းအတွက်အရာအားလုံးပညာရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးမှစျေးကွက်နှင့်အချက်အလက်နည်းပညာ။ တစ္ခ်ိန္တုန္းနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့နှင့်နှစ်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ၊ဂီသောခေတ်မီရောစပ်၏ရှေးဟောင်းလေထုနှင့်ခေတ်မီဆန်းသစ်တီထွင်။ ရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပြည်ပဂီအတွက်ပျော်မွေ့မည်အရည်အသွေးမြင့်မားဂီလူနေမှုအတူတစ်ဦးတက်ကြွနှင့်အားလုံးပါဝင်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်။မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊အများဆုံးအလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းများကိုတွေထဲမှာတည်ရှိပြီးနှင့်အဝှမ်းစည်မြို့စင်တာများ၏တည်နေရာ၊မြို့တော်၊ဒေါင်လိုက်၊အတန္းအချာပါ။
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံ၊အလုပ္သင္လည်းအဘို့အကြည့်ကုန္သြယ္မႈအတွက်လျော့နည်းလူနေတောင်ပိုင်း ။ လစ္စ-ကျော်နှင့်အတူ ၂။ ခုနစ်သန်းအတွက်ဒေသခံ မြို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်ခြေဖုံး၊လစ္စသည်အင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းပူဇော်သက္ကာအများဆုံးအလုပ်အတွက်မြန်မာ။ ၏တစ်ဦးအဖြစ်အသက်အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ၊ဥရောပတိုက်တွင်လစ္စသည်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်နည်းပညာစင်တာဂီ၏။ ကုန္သြယ္မႈအတွက်လစ္စပေးလိမ့်မည်အလုပ္သင္အတူအခွင့်အလမ်းခံစားဖို့နောက်ကျဗိသုကာ၊သမိုင်းပြတိုက်၊အထင်ကြီးအော်ပရာအိမ်များ၊၊ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်များ၊နှင့်စေ့စပ်တွေက။ အဖြစ်အများဆုံး၊စက်မှုဒေသကိုနိုင်ငံ၊လစ္စဘွန်းအတွက်စံပြအလုပ်အတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ၊စီးပြားေရးအၾကံေပး၊အင်ဂျင်နီယာနှင့်အသုံးချ။ ဒေါင်လိုက်-အဖြစ်ဒုတိယအကြီးဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးတီးဂီအတွက်၊ဤသာယာလှပကမ်းရိုးတန်းမြို့ရှင်တစ်ဦးမြို့ပြလူဦးရေ၏၁။ လေးသန်း။ နာမည်ကြီးများအတွက်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုများ၊ဆိပ်ကမ်းကိုစပျစ်၊ဒီဧရိယာလးေတြ၏ဗဟိုကုန်သွယ်ရေးကတည်းကရောမအင်ပါယာ၊အကြွင်းမြင်နိုင်ပါသည်သောအလယ်ခေတ်ခရိုင်၏မြို့တော်အဖြစ်ခွဲခြားကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အားဖြင့်အနက်အတွက် ၁၉၉၆။ အဒေါင်လိုက်ကျောင်း၏ဗိသုကာအရပ်၌တည်ရှိ၊ဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အထင်ထင် ဥပမာ င့္။ နေစဉ်လစ္စသည်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ဒေါင်လိုက်အနူကလီးယပ်များဖျော်ဖြေရေးနှင့်အနုပညာ။ ဒေသ၏မြို့ မြို့တော်၏ဤဒေသတွင်တောင်ဘက်စွန်းကျွန်းဆွယ်၏။ ရုံနှင့်အတူအောက် ၆၅၊၀၀၀ နေထိုင်သူများ၊ဤမြို့နှင့်အနီးချင်းမြို့များဂို့နှင့် အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်စရာတွေကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးလျှော့ပေါ့၊လျော့နည်းဖစ္တယ္။ အတူအများပြည်သူတက္ကသိုလ်ကြီး၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းနှင့်ရေကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေးနှင့်ဧည့်ဝတ်ကုန္သြယ္မႈအတွက် ဘုံရှိပါတယ်။ အပြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများအတွက်ရုံးအပိုစက်မှုဇုန်ဧရိယာဂီ၏ထောက်ပံ့၊တစ်ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်း၏အလုပ်အခွင့်အလမ်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊အတိုင်ပင်ခံ၊အချက်အလက်နည်းပညာ၊ဆက်သွယ်ရေး၊အင်ဂျင်နီယာ၊စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊အစည်းအနုပညာတူ၊ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်း။ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံ၏အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတွက်ပညာရေး၊အခြေခံဖန်တီးရန်အတွက်အဖွင့်.
သင်ကြားမှုနှင့်သုတေသနနယ်ပယ်။ ပၚတူဂီသားခရီးသြားလုပ္ငန္းအတော်လေးတက်ကြွပြီးအလုပ်သင်များကိုလည်းရရှိနိုင်အတွက်ဆေးရုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ။ ကုန္သြယ္မႈဂီအတွက်ကွဲပြားအရှည်ပေါ်မူတည်ပြီး၊အလုပ္အကိုင္၊သို့သော်အများစုမှာအကွာအဝေးဘယ်နေရာမှာမဆိုမှလေးပတ်ကြာမှ။ လျှောက်ထားနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးလိမ့်မည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးအလုပ်အခွင့်အလမ်းမှရွေးရန်၊ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်ရတဲ့၏ငှားရမ်းသို့ပေါ်တူဂီအလုပ်စျေးကွက်။ ပျမ်းမျှတစ်နေ့အဘို့အလုပ္သင္ဂီအတွက်အလားတူအခြားဥရောပနိုင်ငံများနှင့်အတူ၊ရှည်လျားတဲ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ပိုပြီးညဦးယံအချိန်နာရီ။ အဖြစ်နှင့်အတူမည်သည့်အလုပ်ပြည်ပမှာ၊အခြေခံအသိပညာများ၏မိခင်ဘာသာစကားသည်အဖိုးမဖြတ်အောင်များအတွက်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ဆက်လုပ်နေချိန်မှာ ဂီအတွက်။ အချို့သောအစီအစဉ်လိမ့်မည်တောင်မှကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ရှိတွင်သင်ခန်းစာများအတွက်အလုပ္သင္သူတို့ရဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အလုပ်သင်အစီအစဉ်။ နေသော်လည်းကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းနှင့်နီးကပ်မှစပိန်အသင်း၊အချို့သောဒေသများရှိစပိန်စကားပြောနိုင်မည်အဖြစ်မှတ်ယူ ကြောင့်၊ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်ယဉ်ကျေးမှု ဖာ၏ပေါ်တူဂီဘာသာစကား။ ကံကောင်း၊အလွန်ဖွယ်ရှိသည်တစ်နံပါတ်တွေ့ပေးဆောင်ကုန္သြယ္မႈဂီအတွက်ရှိပါတယ်၊သို့သော်အချို့ကလည်းရာထူးအဖြစ်ကောင်းစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန္သြယ္မႈဂီအတွက်မပါဘဲသို့မဟုတ်နှင့်အတူအနည်းဆုံးလုပ်ခလစာမကြာခဏပူဇော်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်တစ်ဦးသောအဘို့ကိုအစားအစာအဖြစ်အဖြဲဲနာရီအဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့။ ဂီထက်လျော့နည်းစျေးကြီးသည်အချို့သောအခြားဥရောပနိုင်ငံများရှိ၊ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းတွေအလေ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားအပိုလူဦးရေနှင့်စက်မှုရပ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်လစ္စနှင့်ဒေါင်လိုက်။ အချို့ယာက္နဲးလည်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အပေါ်အသက်ရှင်နိုင်အဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ်ဒေါ်လာ ၇၊၀၀၀။ မြို့တော်အတွက်သင်ပေးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်သအထက်သို့၏ခုနစ်ယူရိုများအတွက်မုန့်ညက်၊ကျော်သုံးဆယ့်ငါးယူရိုအတွက်လစဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန်၊နှင့်ပတ်သက်ရာပ္ရွင္အဆောင်။ အပြင်ဘက်ကိုမြို့စင်တာများ၊ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့ချခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းနှစ်ခုမှဆယ်ပသည္။ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်မှာဂီအတွက်ပူဇော်အများကြီးနှင့် အိမ္ရာ၊သော်လည်းအိမ္ခန္းနှင့်အခန်းပေါင်းများမှာလည်းအတွက်ပုံမှန်အလုပ္သင္ဂီအတွက်။ ပျမ်းမျှငွားမည့္လစ္စသည်ယူရို ၅၅၀ အဘို့အတစ်လလျှင်တစ် အိပ်ခန်းတိုက်ခန်းကို၊နှင့် ၃၈၀ ယူရိုႏွပြင်ပမြို့။ ဒေါင်လိုက်အနည်းငယ်စျေးသက်သာနှင့်အတူ၊ပျမ်းမျှအားအရင္းအကြားနှစ်ရာနဲ့လေးရာယူရိုအတွက်မြို့လယ်။ လျော့နည်းများအတွက်ဘုံအလုပ်သင်အစီအစဉ်ဂီအတွက်၊ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအလွယ်တကူရှာတွေ့။ အိမ္ရာမည်ဖြစ်ထည့်သွင်းအတွက်စာချုပ်သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်တူဂီ၊အကြောင်းကိုမေးမြန်းရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များအတွင်းကေးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်။ ကုန္သြယ္မႈရေရှည်တည်တံ့ထက်လျော့နည်း ၉၀ ရက်မယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်ဗီဇာ။ ကြာကြာချိန်းတြလိုအပ်တစ်ခုခုကိုယာယီသို့မဟုတ်ထိုင္ခြင့္ဗီဇာ။ သာအမိန့်ကိုလုံခြုံစေရန်ဒီဗီဇာ၊အလုပ္သင္ရန်လိုအပ်မည်ကိုပြသရန်အထောက်အထားများ၊အလုပ်၊ခရီးသွားအာမခံ၊အပြန်လက်မှတ်အလုပ်၊စာချုပ်၊နှင့်အတူအနည်းဆုံးနှစ်ဦးကွက်လပ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အကြိမ်ကွဲပြားခြားနားအပေါ်မူတည်ပြီးလျှောက်လွှာတည်နေရာ၊ဒါပေမယ့်လုံခြုံလျှောက်ထားရန်မှာအနည်းဆုံးလူလေးဦးမှခြောက်ပတ်ကြာခရီးစဥ္ရက္မတိုင္မီ။ ပထဝီ:အလုပ္သင္ဒီနေရာမှာဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်နှင့်အလွယ်တကူခရီးသွားလာမှုအများအပြားအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအပါအဝင်စပိန်၊ပြင်သစ်၊မော်ရိုကိုနှင့်အယ္လ္ဂ်ီး။ အဆိုပါရှုခင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနား၊ပူဇော်သက္ကာကျောင်းတွင်ကမ်းခြေများ၊ချောက်၊ရံလျက်ရှိသောအသီး၊စပျစ်ဥယျာဉ်၊ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်တောင်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြေလျော့:အချိန်အနည်းငယ်နှေးကွေးဂီအတွက်။ ရဲ့လားဆိုတာကအသွားအလာ၊အလုပ်လုပ်ကိုင်၊ဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်၊ဂီယူမှကြိုက်တတ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝပါဘဲသြားတတ္ပါျပီ။ ယႏၱ:မှုကြောင့်အအေးယဉ်ကျေးမှုအတွေးဖြစ်စဉ်များအတွက်ဗီဇာ၊လမ္းကေးရှင်း၊နှင့်အခြားအရာရှိများအမျိုးမျိုးစာရွက်စာတမ်းမကြာခဏပိုပြီးအချိန်ယူပါထက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်ပေးဆွဲဖို့အသုံးပြု။ သည်းခံခြင်း၌ဤအထူးသဖြင့်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကား:အခြေခံပညာ၏အသိပညာပေါ်တူဂီအနိုင်များအတွက်အကျိုးရှိသောမည်သည့်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ဂီအတွက်၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ပေါ်တူဂီ၊သို့သော်၊ပိုပြီးခက်ခဲအချစ်ဇာတ်လမ်းဘာသာစကား၊စပ္ၾလားတူနှစ်ဦးစလုံးမှစပိန်နဲ့ပြင်သစ်၊သို့သော်လည်းရှားထံမှကွဲပြားခြားနားတစ်ခုချင်းစီ။ သင္ယူဒီဘာသာစကားလိုအပ်နိုင်ပါသည်အနည်းငယ်ပိုပြီးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်သည်းခံခြင်း။ ကိုယ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းနှင့်အတူစာပိုဒ္တိုပြည်ပအလုပ်အစီအစဉ်။ မရီကျောင်းသားများအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ယ့်အစီအစဉ်၌တဆယ်ငါးနိုင်ငံနှင့်တဆယ်ခြောက်ယောက်မြို့။ ရေမတွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းအတွက်စိတ်ကြိုက်လုပ်အတွက်ရှစ်နိုင်ငံ-နှင့်တူနယ်ပယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ပ်ဥ္ေ၊ဆေးပညာ၊လူမှုရေး၊အလုပ်၊အင္ဂ်င္နီယာ၊ဥပေဒ၊အ။ ပြသရန်အဘို့အသင်၏အချိန်နာ့။ ခွင့်ပြု၊သင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကနေနှစ်ပတ်လမ်းအပေါင်းတို့ဦး။ ဆရာဝန်ပြည်ပနှင့်ပေါင်းစပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့်အတူခရီးသွားလာအဖြစ်အပျက်။ ကိုယ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အစဉ်ရှိခြင်း။ ရဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်၏စပိန်၊နှင့်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ယက်အတွက်ကော့စတာရီ၊ဂွာတီမာလာ၊ပီရူး။ တိုးမြှင့်သင့်အသိပညာ၏ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုအလုပ်နှင့်အတူ ။ ထွက်ရပ်မှလူအစုအဝေးနှင့်အတူဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သင်အစီအစဉ်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊ဂျပန်၊ဗီယက်နမ်က၊တောင်ကိုရီးယား၊ဗြိတိန်နှင့်အတူ အာရှရသင်သည်သင်၏အခမဲ့လမ်းညွှန်ကိုနှင့်အဘယ်မှာထွက်ရှာတွေ့လောကအတွက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ငါ-ငါ အရည်အချင်းအနိုင်ယူ ။ ချိတ်ဆက်-၁၂၃ ကမ်းလှမ်းနိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေရာချထားအတွက်ဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းပြည်ပ။ ကျွန်တော်တို့မှာချောမွေ့တဲ့အစီအစဉ်ဝတ်စုံ။"ကြၽန္ေရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်အချိန်။ ကျွန်မတကယ်သိဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေး၊ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပြု။ ပါခင္ဗ်ာ။ သင္ဟာတပည့္ပင္ျဖစ္ေရှာဖြည့်ဆည်းဖို့လေ့လာမှုလိုအပ်ချက်များကိုယူပြီးတစ်ကွာဟချက်တစ်နှစ်ကို၊သို့မဟုတ်လိုက်ရှာမှာရေတိုရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၊အလုပ်သင်ဆရာဝန်ရုံးချုပ်ဆိုပါ။ အလုပ်သင်အစီအစဉ်များပြေးလစဉ်ပဲရစ်၊ဝယ်လိုအားနှင့်အတူများအတွက်နေရာချထားခံရတသမတ်တည်းအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး။ ခရီးသြားျခင္း၊အလုပ်သင်ဆရာဝန်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအတွက်အထက်တန်းစားမြို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရာပေါင်းများစွာ၏အခြားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ။ ရလက်တွေ့အကြုံအပေါ်သင့်ရဲ့လယ်ပြင်၌အကျိုးစီးပွားများကိုပြုလုပ်ပေးလိုက် ရဲ့သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း။ ဘယျသို့အထဲကစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေ။ ရွေးချယ်သင်နှစ်သက်တဲ့တည်နေရာ၊အလယ်နှင့်အလုပ္မွာကိုကိုင်တွယ်။ အၾကိဳက္ဆံုးအစီအစဉ်ယ့်။ ကိုယ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းနှင့်အတူစာပိုဒ္တိုပြည်ပအလုပ်အစီအစဉ်။ မရီကျောင်းသားများအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် သုံးဆယ်သုံးအစီအစဉ်၌တဆယ်ငါးနိုင်ငံနှင့်တဆယ်ခြောက်ယောက်မြို့။ ရေမတွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းအတွက်စိတ်ကြိုက်လုပ်အတွက်ရှစ်နိုင်ငံ-နှင့်တူနယ်ပယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ပ်ဥ္ေ၊ဆေးပညာ၊လူမှုရေး၊အလုပ်၊အင္ဂ်င္နီယာ၊ဥပေဒ၊အ။ အယုမိဿပေးသည်ကိဳ-ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အကြို-ကျန်းမာရေးကျောင်းသားများ -လိုက်နာ၊ကျင့်ဝတ်ရိပ်နာရီအတွက်နိုင်ငံတကာဆေးရုံများ။ အယုမစ်ရှင်ကိုကူညီဖို့ကြို-ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အကြို-ကျန်းမာရေးကျောင်းသားများရွင္မ်ား၊ဒါနဲ့အတွက်ဆေးဝါးအမေတ္တာတရားအပြည့်ဖြင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်မှုသည်။ လိပြည်ပမှာ၊မှတ်ပုံတင်အကျိုးအမြတ်မယူအဖွဲ့အစည်းများ၊ပို့ချီ(မထောင်ပေါင်းများစွာ)လူအများနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှဆရာဝန်သို့မဟုတ်နာ့အတွက်နှစ်ဆယ်-ခြောက်ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း။ ကျွန်တော်လုပ်နေခဲ့တာဒီကတည်းက ၂၀၀၀၊နှင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးခရီးသွားလာအကြောင်းနားလည်အတွေ့အကြုံအဖွဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နာ့။ ကတည်းကကမ်းလှမ်းသူများအံ့သြဖွယ်အတွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အဂီယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသက်လမ်းမှတစ်ဆင့်ပြည်ပအလုပ်သင်ဆရာဝန်အတွေ့အကြုံအတွက်တည်နေရာ၊မြန်မာ။ ကတည်းကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ကေတများကိုမူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းများအတွက် သင်တန်းသားများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့နှင့်မွေးမြူသူတို့၏အနာဂတ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရတဲ့အစီအစဉ်ပေးသည်၊ကျောင်းသားတွေအခွင့်အလမ်းကိုနွေရာသီသုံးစွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲမိမိတို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အပြည့်အဝ-အချိန်အလုပ်အတွက်လစ္စ။ ၌နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ဥရောပတိုက်ရဲ့အများဆုံးဖန်တီးမှုနှင့်ည့္ခါမြို့ခံအဆောက်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်၊သင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်။ အခြားမတူဘဲ'ကွတ်ကီးရှုး'အလုပ္သင္အစီအစဉ်၊ကျနော်တို့ကိုလုံလုံခြုံခြုံစိတ်ကြိုက်လုပ်သိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား။ ဤအစီအစဉ်များအတွက်စံပြတစ်ခုရင့်ကျက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသူအဆင်ပြေသည်ပြည်ပခရီးသွားလာတစ်ဦးတည်းနှင့်အတူဝေးလံခေါင်သီထောက်ခံမှု၊ဒေသခံထောက်ခံ။ ကျွန်တော်အလုပ်အားလုံးကိုလုပ်တယ်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံခြေရာခံပေးတဲ့အံဝင်ခွင်ကျနေရာချထားအပေါ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပရိုဂရမ်ရေးစီမံကိန်းနှင့်အတူစတင်တည်ထောင်သို့မဟုတ်တိုးတက်မှုနှုန်းအဆင့်သုံးလေးပတ်အတွက်လစ္စဘွန်းများအတွက်စီးပွားရေးစိတ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပိုယ်။ ဘော်မည်အလုပ်လုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ကွန်ပျူတာတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဘယ်သူတစ်ဦးတည်းသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ 'ဖြည့်စွက်တစ်ဦးအလုပ်သင်လေ့လာနေစဉ်။ ၏အများဆုံးလုပ်သင့်နွေရာသီအားဖြင့်ခရီးသွားလာနှင့်အတူဖိုရမ်-ထုတ္ကုန္ပ။ ဝင်ငွေအထိကိုးချေးငွေအပါအဝင်၊သုံးနိုင်ငံချေးငွေ၊ခရီးသွားလာနေစဉ်အချို့သောအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများအတွက်ဥရောပနှင့်အတူအခြားကျောင်းသားများမှကမ္ဘာအနှံ့။ ကုန္သြယ္မႈကြသည်။ အရှိန်အဟုန်မြှင့်လစ္စသည်ပြင်းထန်သော ၆-ပတ္၊၆-ခရက်ဒစ်မှအလုပ်ရှာဖွေရေး-အရှိန်အစီအစဉ်များအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးကျောင်းသားများသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသောသူစက်မှုလုပ်ငန်းသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊နှင့်မြှင့်တင်ရန်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးထိခိုက်အလုပ်၊အားလုံးအသရေကိုစူးစမ်းလေ့လာစဉ်တစ်ခုမှာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံး-စောင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ။ တွင်နေထိုင်သောလူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာလစ္စတည်ရှိမှုမျဉ်းေအာက်ကျေရာက်သည်။ ဤအများအပြားကလူနေအိမ်တွင်နေထိုင်သောသူတို့ကိုစောင့်မရှောက်ကြပါပူနွေးသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံ၊မကြာခဏအသုံးပြုခွင့်မရှိဘဲ။ တနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားဆောက်ပြီး။။။ကူညီ နေအိမ်များအတွက်။ သည်ကမ္ဘာ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တတ်နိုင်နာ့ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအကြီးဆုံးအကွာအဝေးထိပ်-သတ်မှတ်စီအစဉ်များကို၊ရရှိနိုင်သည့်အတွက်လေးဆယ်ခရီးတစ်နှစ်ပတ်လုံး။ ကျနော်တို့အရပ်ဌာနကိုကျော် ၁၈၊၀၀၀ နာ့ဝန်ထမ်းများပြည်ပမှာနှစ်စဉ်နှင့်ကျော်ရှိသည်ဆယ်နှစ်အတွေ့အကြုံပေးအပ်ခြင်းအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံ။.